Wario သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် LEGO Super Mario သို့လာမည်လား။
16 / 06 / 2021 16 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 820 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, Lego မာရီယို, Lego စူပါမာရီယို, Luigi, မာရီယို, Nintendo, Nintendo ပြောင်းလဲမည်, ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များ, ချင့်ချိန်ခြင်း, စူပါမာရီယို, ဝါရီယို, WarioWare, WarioWare: အတူတကွရယူပါ
နာမည်ကြီးရေပိုက်သမား၏ doppelganger လာနိုင်သည် Lego စူပါမာရီယို 2022 ခုနှစ်တွင်? ဇာတ်ကောင်ပြန်လာနေပုံရသဖြင့်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Wario ဗားရှင်းရရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။
E3 သည်မည်သည့် update ကိုမျှမပြသနိုင်ပေ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း, ဂိမ်းကစားသူတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ကဲ့ရဲ့ဖို့လုံလောက်တဲ့ထုတ်ဖော်ပြသထက်ပိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ပြပွဲ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးသောပြသမှုတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးသောနေ့၌ WarioWare ခေါင်းစဉ်အသစ်ပေါ်ထွက်လာသည့် Nintendo Direct တွင်ဖြစ်သည်။
WarioWare: Get It Together သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ WarioWare Gold နှင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းသူအားရည်စူးထားသောပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး Super Smash Bros. Ultimate တွင်ပါဝင်သည်။ ဇာတ်ကောင်ကမီးမောင်းထိုးပြန်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မသိချင်ဘူး Lego Wario ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
WarioWare ဂိမ်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောသူများအတွက် အကယ်၍ အကယ်၍သာ အကယ်၍ ကစားခဲ့လျှင်၎င်းသည်အလားအလာရှိသောအင်္ဂါရပ်များကိုအရိပ်အမြွက်ပြလိမ့်မည် Lego ဇာတ်ကောင်များအတွက် controller ကို။ Mario နှင့် Luigi တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကိုလက်ခံရရှိသည့်နည်းတူသင်တန်းတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအရာများပါ ၀ င်သကဲ့သို့ Wario အနက်သည်အဓိကဂိမ်းတွင်လည်းအလားတူပြုမူနိုင်သော်လည်းအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောလှည့်ဖျားကစားနည်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများလည်းရှိသည်။
ဇာတ်ကောင်၏အဓိကစီးရီးဂိမ်းများသည် microgames စုဆောင်းမှုကိုပေးသောကြောင့်aLego Wario သည်ဆောက်လုပ်သူများအုတ်များနှင့်ပြုပြင်ရန်သေးငယ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုလည်းကိုင်တွယ်သည်။ နှင့်အတူပေါင်းစည်းမှု Lego စူပါမာရီယို ဒီ app ကအသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ microgame သင်တန်းများကိုအခြားကစားသမားများထံမှသိမ်းဆည်းထားရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
နေ Lego Wario ကိုအတည်မပြုရသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးဆန်းသောပြန်လာခြင်းကိုသာမျှော်လင့်နိုင်သော်လည်းချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်ကောင်သည်၎င်းအတွက်လုံလောက်ပါသည် Lego နောက်ဆုံးတွင်ထိုအထင်ကရနှုတ်ခမ်းမွှေးကိုထပ်မံဖန်တီးရန်အုပ်စုဖွဲ့ပါ။ Wario ကနောက်လာမယ့်ဒီဂျစ်တယ်ပုံမဟုတ်ရင်ငါတို့ရပြီ အခြားအများကြီး ideas အနာဂတ် Controller များအတွက်။
← အဆိုပါ Lego Batman ရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲနီးပါးတစ်ခါမှမမြင်ဖူး crossover ရှိခဲ့ပါတယ်
Lego Star Wars UCS ပန်ကြားချက်မဲထပ်မံပေါ်ပေါက်နိုင် →